अनामनगर, बिजुलीबजारसहित धोबीखोला किनारका कयौं वस्तीमा कसरी पस्यो बाढी? « Asia Sanchar : Nepal News Live
अनामनगर, बिजुलीबजारसहित धोबीखोला किनारका कयौं वस्तीमा कसरी पस्यो बाढी?
३० श्रावण २०७५, बुधबार १४:२७
काठमाडौं – धोबीखोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा अनामनगरदेखि बिजुलीबजार क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले पानीको बहाव धेरै भएका कारण बस्तीमा पसेको बताएका छन्।
खोला मिचेर बनाइएका घर भवनका कारण धोबीखोला उर्लिएर अाउँदा बाढी वस्तीतर्फ पसेको हाे। बाढीले कपन नीलोपुल, गोपीकृष्ण, ओम अस्पताल, रातोपुल, कालोपुल, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी क्षेत्रका बासिन्दा धेरै प्रभावित भएको घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। नीलोपुलमा राति एक बजे बाढी आएको र त्यस क्षेत्रको एउटा सानो पुल भत्काई पानी थुनिएपछि सतहबाट बस्तीमा बालुवासहित लेदो पानी पसेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।
त्यस्तै गए रातिको अविरल वर्षाले निर्माणाधीन बिजुली बजारको पुल थुनिँदा अनामनगर, बिजुली बजारलगायका बस्तीमा पानी पसेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएका हुन् । घर, पसल, विद्यालय, होटल, पब्लिकेशनलगायतमा पानी छिरेको थियो।
बाढीको क्षतिबारे बुझ्न बिहानै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद प्रकाशमान सिंह उक्त ठाउँ पुगेका छन्। उनले जनतासँग बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी लिँदै बाढीपीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं महानगरपालिकामा टेलिफोन गरी पीडित बासिन्दाको समस्याबारे अवगत गराएका थिए। उनले सो क्षेत्रमा आगामी दिनमा बाढी नपसोस् भन्नेबारेमा दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन्।